Ny fitaovana mamirapiratra manome fahafahana anao hijery horonantsary vaovao sy fahitalavitra tsy misy famandrihana isam-bolana?
Miaraka amin'ny Ultimate TV amin'izao fotoana izao hamidy eran'izao tontolo izao, ity dia vahaolana tsara hijerena ny sarimihetsika ankafizinao sy asehonao ho an'ny besinimaro!
Fantatsika rehetra fa mety ho sarotra ny fandaniana telovolana amin'ny banky sy ny sampan-draharaha.
Miantso ny cable, Netflix, sarimihetsika sy fanatanjahan-tena amin'ny fangatahana ianao ... manampy izany.
Ary Mazava ho azy fa misy avokoa ireo fitaovana rehetra ireo. Ny mpandefa anao, AppleTV na Firesticks, DVD Player ary matetika sarotra Smart TVs.
Noho izany dia tsy mahagaga raha mihabetsaka kokoa ny olona mitady vahaolana, mora kokoa ny manapaka ny faktioran'ny cable ary miala amin'ny fitaovana rehetra.
Soa ihany fa misy vahaolana hiarovana ny raharaham-pitsarana.
Ny orinasa fananganana orinasan-tseratserasera napetrak'i Etazonia dia nahazo fitaovana vaovao sy tsy dia mahafa-po izay manova ny fomba nandaniany ny media.
Antsoina hoe TV Fahitalavitra izany . Izy io dia boaty an-trano fanatanjahantena ao amin'ny trano fandraisam-bahiny izay mety mora mifandray amin'ny fahitalavitra. Izy io dia miaraka amin'ny zava-drehetra efa napetraka ary mihazakazaka ao anatin'ny minitra vitsy. Tsy mila fahalalana ara-teknika.
Izy io dia ivotoerana fialam-boly iray manontolo izay ahafahanao manaisotra ny fitaovana hafa rehetra sy ny telefaona hafa. Ny fampiharana rehetra fantatsika dia efa nomanina mialoha toy ny mety hahafantaranareo azy avy amin'ny vokatra toy ny AppleTV, Amazon Firestick sns. Fa misy fahasamihafana lehibe - mamela anao hijery zavatra maimaim-poana izany. Tsy misy famandrihana ary tanteraka ara-dalàna.
Mora! Ampifandraiso fotsiny ny fahitalavitra farany amin'ny fahitalavitra anananao. Ny telegrama rehetra dia tafiditra ao anatin'ny fonosana. Tsindrio ny bokotra herinaratra ary tanteraho. Tsy misy dikany, mila 10 segondra ara-bakiteny izy ary afaka mijery izay tianao.
Ny fahitalavitra faran'ny farany dia nanova tanteraka sy nanavao azy io ary mbola mora kokoa izany. Ny teknolojia Ultimate TV dia mikaroka ny aterineto izay hikaroka sy hitetezana azy, na fandaharana amin'ny fahitalavitra, sarimihetsika Hollywood, na hetsika ara-panatanjahantena tianao hijerena na tsy manahy momba ny fandoavana saram-pananam-bola na famandrihana isam-bolana.
"Ity fitaovana ity dia nahafahako vola an-taonany!"
Azonao atao ihany koa ny mizara ny fahitalavitra mivantana 24/7 ka tafiditra ao anatin'izany ireo fantsona rehetra azonao avy amin'ny orinasan-kaontinao ao an-toerana ary an-jatony maro manerana izao tontolo izao. Ny zava-drehetra Ultra HD mazava ho azy.
Ny feo hay mety ho marina dia ny zava-misy, tsy misy tsipika mifatotra. Mazava ho azy fa mila manana aterineto ianao ary izany dia vola kely vitsivitsy isam-bolana. Saingy tsy manana izany ianao? Ary momba ny fandefasana sy ny fotoana fandefasana. Ny fahitalavitra Ultimate dia manitsy ny hafainganam-pandehanao amin'ny aterineto ka ny karazana votoaty rehetra dia azo jerena avy hatrany. Raha miasa Youtube ny fahitalavitra Ultimate dia hiasa ihany koa.
Amin'ny fahitalavitra faran'ny farany dia hahazo fiadanan-tsaina ianao, satria fantatrao fa afaka mijery ny fampisehoana ankafizinao indrindra ianao.
Saingy ara-dalàna ve izany?
YES! Antoka. Ara-dalàna ny mampiasa izany satria tsy mamonjy ny votoaty fotsiny ianao. Izany no zavatra lehibe momba izany.
Mazava ho azy fa tsy faly amin'ny orinasa ny orinasan-telefaona ka miezaka ny hampiato ny TV farany amin'ny fivarotana azy ireo amin'ny vahoaka. Noho izany dia mety hiverina an-tsoratra tsy ho ela, fa raha vantany vao manana iray ianao dia tena tsara ary afaka hijery ny zava-drehetra ho an'ny fahalalahana mandrakizay - tanteraka ara-dalàna.
Manao ahoana ny fandehanako vola?
Heverinao angamba fa lafo be ity fitaovana ity ... Diso! Ny fahitalavitra Ultimate dia mihazakazaka mividy 1 mahazo 1 FREE offer! Ny fotoana fandoavam-bola - tsy misy famandrihana, tsy misy vola lany isam-bolana. Zahao hahitanao azy!
Aiza no hividianako ny iray?
Afaka mividy izany mivantana avy amin'ny tranonkalan'ny orinasa ianao amin'ny alàlan'ny klikanao eto .
FANAMPIM-BAIBOLY: Raha mbola mitaky zavatra be dia be izao ny olona, ​​dia mividy fitaovana maro samihafa amin'ny fotoana ilany hividy azy ireo amin'ny vidiny ambony kokoa. Azafady azafady 1-2 herinandro ho an'ny fandefasana.
Azo ampiasaina any amin'ny firenena rehetra manerana izao tontolo izao ny TV amin'ny farany .
Manomboka mijery zavatra maimaim-poana ...
Amin'izao fotoana izao dia efa nampahafantarina anao momba io zava-miseho mamirapiratra io, avelao aho hampiseho aminao fa mora ny manangana. Ny tokony hataonao dia ny manaraka ireto dingana 3 ireto:
Dingana 1: Mametraha farany ny fahitalavitra androany mba hanararaotra ny fividianana 40% OFF.
Dingana 2: Rehefa raisinao, sokafy ny fonosana ary mampifandray izany amin'ny fahitalavitra tianao amin'ny fampidirana telegrama ary tsindrio ny bokotra herinaratra. Ny fahitalavitra faran'ny farany dia manontany ny fanalahidinao wi-fi. Apetraho izany ary vonona handeha ianao.
Dingana 3: Jereo izay maimaim-poana ... Ny fahitalavitra faran'ny farany dia hampiseho azy ho fanakanana na fampisehoana malaza, ary afaka mijery zavatra foana ianao ary mijery azy avy hatrany.
Ity misy tip ity: Fahombiazana lehibe ny fahitalavitra satria izy no hamonjy ny rehetra, izay mandray izany, vola tonelina!
Satria maro ny olona mividy fitaovana maro atsy ho atsy mba hahafahan'izy ireo miverina-nodidiana! Ka azafady manome alalana 1-2 herinandro ho an'ny fandefasana. "